जोडियो छिनेको हात | चितवन पोष्ट दैनिक
जोडियो छिनेको हात
२०७० चैत्र १०, सोमबार ०३:०३ गते
भरतपुर । चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरले एक जटिल शल्यक्रिया सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमै दुर्लभ मानिने शरीरको छुट्टिएको अङ्गलाई अस्पतालले पुनः जोड्न सफल भएको छ । भरतपुर–२ क्षेत्रपुरका २३ वर्षीय मोहन थापाको शरीरबाट पूर्णरूपमा छिनेको बाँया हात शल्यक्रियापछि पुनः जोडिएको छ । गएको शुक्रबार राति गरिएको यो शल्यक्रिया चिकित्सकहरुले दुर्लभ र जटिल मानेका छन् ।
‘यो निकै जटिल शल्यक्रिया हो’, शल्यक्रियामा संलग्न हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. सुरेस पाण्डेले भने, ‘शरीरबाट छुट्टिएका अङ्गलाई पुनः शरीरमै जोड्नका लागि शल्यक्रियाका क्रममा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जुन हाम्रो टिमको परिश्रम र समन्वय सफलताका कारण हुन् भन्ने लाग्छ ।’
नारायणगढस्थित अन्नपूर्ण फर्निचरका कर्मचारी थापाको काठ चिर्नेक्रममा मेसिनले बाँया हातको नाडीभन्दा माथि छिन्न पुगेको थियो । शुक्रबार दिउँसो दुई बजे मेसिनले हात काटेलगत्तै उनको उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज पु¥याइएको थियो, तर सो अस्पतालले हातको शल्यक्रिया आफ्नो अस्पतालमा नहुने भन्दै काठमाडाँै रिफर गरिएपछि बिरामीलाई चितवन मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार सुरू गरिएको थियो ।
‘छुट्टिएको हात जोड्नका लागि दुईवटा हड्डी, रगत जाने नली, नाडीको धमनी, दुई वटा नसा, रेडियसन र अल्नाको संयोजन मिल्नुपर्छ’, डा. पाण्डेले भने, ‘जोड्नभन्दा पनि जोडिएको अङ्गमा रक्तसञ्चार गराउनु जटिल काम हो । यो सफल भएको छ ।’
चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरुको टोलीले चार घण्टाको लामो शल्यक्रियाबाट थापाको हात जोडेको हो । शल्यक्रियापछि अहिले थापा अस्पतालकै आईसीयूमा उपचार गरिरहेका छन् । अस्पतालका हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो । टोलीमा अस्पतालका प्लाष्टिक सर्जन डा. बुद्धि अधिकारी, अर्थोपेडिक्स सर्जन डा. ज्योति श्रेष्ठ, एनेस्थेसिया डा. गोपेन्द्रप्रसाद देव, डा. भारती शर्मा र डा. सुरेन्द्र न्यौपानेको सहभागिता रहेको थियो ।
चिकित्सा विज्ञानमा दुर्लभ र जटिल मानिने छुट्टिएका अङ्ग पुनः जडान गरिने शल्यक्रिया गरिएको उपत्यका बाहिर नै सम्भवत पहिलो दावी गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक दशकअघि नेपालमा पहिलो पटक यस्तै प्रकृतिको शल्यक्रिया गरिएको थियो । यो अस्पतालले अहिलेसम्म दुवै हात जोड्नेसहित आधा दर्जन यस्ता जटिल शल्यक्रिया गरेको बताइन्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार शरीरको कुनै पनि अङ्ग छुट्टिएको ६ घण्टाभित्र अस्पताल पु¥याए अरू असामन्य जटिलता नभए जोड्न सकिन्छ । त्यसका लागि छुट्टिएको अङ्गलाई नभिज्ने गरी बरफमा राखेर जोगाउनुपर्ने हुन्छ । थापालाई पनि हात काटिएलगत्तै डेड घण्टा भित्रै चितवन मेडिकल कलेज पु¥याएको थियो । अस्पतालले शल्यक्रिया ६ घण्टामा सकिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
काटिएर छुट्टिएको अङ्ग जोडिएर सुधार आएपछि लामो समय फिजियोथेरापी आवश्यक पर्ने र त्यसपछि पुरानै अवस्थामा जोडिएका अङ्गले काम गर्न सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सूक्ष्म शल्यक्रियाबाट गरिने यस्तो जटिल शल्यक्रिया सफलताका लागि धेरै कुरामा भर पर्ने अस्पतालका व्यवस्थापक डा. दयाराम लम्सालले बताए ।
‘काठमाडाँै बाहिर पनि जटिल शल्यक्रिया गर्न दक्ष चिकित्सकहरु छन् भन्ने देखाएको छ’, डा. लम्सालले चितवन पोष्टसँग भने, ‘चिकित्सा क्षेत्रमा चितवनले धेरै फड्को मारेको छ । यसका बारेमा सर्वसाधरणलाई पनि जानकारी हुन जरूरी छ ।’